(L) ဝါယာကြိုး - စွဲလမ်းစေသောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသည် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသလား။ (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
အင်တာနက် & ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲ
(L) အမြင့်က Wired: ကိုစှဲကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်ဦးနှောက်ပွနျလညျဖှဲ့စညျးပါသလား? (2011)
မှတ်ချက်များ။ ဤဆောင်းပါးသည်အင်တာနက်စွဲသူများနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည့် ဦး နှောက်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသည်။ သုတေသီများတွေ့ရှိချက်များအရ ၁၀-၂၀% လျှော့ချခြင်းသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်များတွင် frontal cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စဖြစ်သည်။ Hypofrontality သည် ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အသုံးများသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်စဉ်အားလုံးအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာလေ့လာချက်ပါ အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Microstructure ပုံမှန်မဟုတ်သော။
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တင်ပြတဲ့ကောက်ရိုးလူရဲ့အငြင်းအခုံကိုစာလုံးစောင်းလိုက်တယ် ကားလ် Friston။ သူက frontal cortex မီးခိုးရောင်ကိစ္စဆုံးရှုံးမှုသည်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အကျိုးရှိနိုင်သော်လည်း၊ ဥပမာအားဖြင့် (လန်ဒန်တက္ကစီယာဉ်မောင်းများ) အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောမီးခိုးရောင်ကိစ္စတိုးလာခြင်းအားအကြံပြုသည်။ သူကထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်ထိုကဲ့သို့သောပြောင်းလဲမှုမကြုံတွေ့ရကြောင်းသတိပြုမိရန်မလိုပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အွန်လိုင်းနာရီများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၎င်းအပြောင်းအလဲများ (hypofrontality) သည်အခြားစွဲလမ်းမှုတွင်တွေ့ရသောအပြောင်းအလဲများကိုတုပသည်။
Dave Mosher by | သောကြာနေ့, ဇွန်လ 17, 2011
ဦးနှောက် Scan ဖတ်အွန်လိုင်းဦးနှောက်ထဲမှာကာလတုန်းကမရခဲ့ဘူးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမှချည်ထားသောဖြစ်ပါတယ်အလွန်အကျွံအချိန်ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း
ကလေးတွေကသူတို့၏ Online ပုံနှစ်ပေါင်းတစ်ဦးတိုးပွားလာအစိတ်အပိုင်းဖြုန်းနှင့်သူတို့ dutifully လူကြီးသို့သယ်ဆောင်နေတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်အခြေအနေမျိုးမှာ, သို့သော်, အင်တာနက်ကိုအတူချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စထိန်းချုပ်ထဲကလိမ်ပင်တစ်ခုစွဲဖြစ်လာပေမည်။
အွန်လိုင်းစွဲ၏ဖော်ပြချက်သုတေသီများအကြားမှာအကောင်းဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်ရှိပါသည်သွားရမည်အကြောင်း, တစ်ဦးလေ့လာမှုအသစ်အငြင်းအခုန်အတော်များများကတဆင့်လျှော့ချနှင့်အွန်လိုင်းအလွန်အကျွံအချိန်ကိုယ်ထိလက်ရောက်တစ်ဦးနှောက် rewire နိုငျကွောငျးကိုအရိပ်အမြွက်။
PLoS ONE မှဇွန်လ ၃ ရက်တွင်ထုတ်ဝေသောအဆိုပါအလုပ်ကအင်တာနက်စွဲစွဲလမ်းမှုအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်သောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကို ဦး စားပေးသည်။ ထို့အပြင်အွန်လိုင်းစွဲလမ်းမှုကြာချိန်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်အဆင့် ဦး နှောက်သည်အရှိန်လျော့သွားပုံရသည်။
လေ့လာမှုတွင်မပါ ၀ င်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုမှအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် Nora Volkow က“ တစ်နေ့ကို ၁၀ နာရီမှ ၁၂ နာရီကြာအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုမပြောင်းလဲစေလျှင်အံ့အားသင့်မိလိမ့်မယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုသည့်ရောဂါမဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားမရှိခြင်း ဤကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများသည် ၄ ​​င်း၏ရောဂါရှာဖွေသတ်မှတ်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အတိအကျဖြစ်သည်” ဟုသူမကဆိုသည်။
ထိထိရောက်ရောက်မသတ်မှတ်ထားသောစွဲလမ်းမှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ဦး နှောက်၏ရောဂါဖြစ်ပြီးမနှစ်မြို့ဖွယ်ကျန်းမာရေးသို့မဟုတ်လူမှုရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိစေကာမူ၊ ထို့အပြင်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်သုတေသီအများစုက၎င်းကိုနေ့စဉ်ဘဝ၏စည်းချက်မှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောအလွန်အကျွံ (စွဲလမ်းမှုရှိသည့်) အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအဖြစ်အလားတူဖော်ပြကြသည်။
သို့သျောလညျးဤကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးသို့မဟုတ်နီကိုတင်းအဖြစ်ဝတ္ထုများမှစှဲနဲ့မတူပဲ, အင်တာနက်, အစားအစာ, စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပင်လိင်မှအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်ဦးနှောက်သုတေသီများအကြား touchy ဖြစ်ကြသည်။ သာလောင်းကစားဝိုင်းထို Diagnostic ၏နောက်တစ်နေ့ကြားမှာနှင့်စာရင်းအင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏လက်စွဲ, ဒါမှမဟုတ် DSM, ဦးနှောက်နှင့်အတူကော်လံကလွဲနေတယ်သွားနိုင်ပါတယ်အရာ၏နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသမ်မာကမျြးထဲသို့အောင်လတ်ပုံရသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အာရှနိုင်ငံများအင်တာနက်စွဲရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် IAD တစ်တစ်လောကလုံးနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဘို့န်းကျင်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်မဟုတ်။
တရုတ်အင်တာနက်စွဲတစ်ခုငလျင်ဗဟိုချက်မှာနှင့်ပြဿနာရဲ့သုတေသနအတွက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ဖို့အများကြီးအားဖြင့်စဉ်းစားသည်။ မြို့ပြလူငယ်၏ 14 ရာခိုင်နှုန်းခန့်သလောက်ရှိပါတယ်-အချို့ 24 သန်းတရုတ်လူငယ်အင်တာနက်ကိုအစည်းအရုံးသည်နှင့်အညီ, အင်တာနက်စွဲအဖြစ်ဥပဒေကြမ်းလေးတွေ-fit ။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, အမေရိကန်ရာခိုင်နှုန်းကို5မှ 10 န်းကျင်မြို့ပြလူငယ်တွင်အွန်လိုင်းစွဲနှုန်းထားများမြင်စေခြင်းငှါ, အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်လေ့လာမှု Co-စာရေးဆရာများ Kai ယွမ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင် Xidian တက္ကသိုလ်ဝေ Qin ကဆိုသည်။
Xidian တက္ကသိုလ်မှလေ့လာမှုနှင့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Karen M. von Deneen ကတရုတ်ပြproblemနာ၏အတိုင်းအတာသည်အစတွင်ထူးခြားပုံရသော်လည်းတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်မကိုက်ညီဟုထင်ရနိုင်သည်
မိဘများနှင့်ကလေးတွေအလုပ်နှင့်ကျောင်းအတွက်ဖျော်ဖြေဖို့အလွန်အမင်းဖိအားပေးမှုကိုရင်ဆိုင်ရပေမယ့်စျေးပေါကအင်တာနက်ကဖေးအများဆုံးလုပ်ကွက်အပေါ်ထောင့်လှည့်ပတ်အနားတွင်ပုန်း။ အတွင်းပိုင်း, Warcraft ၏ကမ္ဘာ့ဖလားနဲ့တူ immersive အွန်လိုင်းဂိမ်းဖြစ်ရပ်မှန်များစောင့်ဆိုင်းနှင့်အဖွင့်နှင့် ပတ်သက်. မည်သူမဆိုအဖြစ်မှန်ထဲကစစျဆေးဖို့ခွင့်ပြုပါ။
“ အမေရိကန်တွေမှာကိုယ်ပိုင်အချိန်သိပ်မရှိကြဘူး၊ ဒါပေမယ့်တရုတ်တွေကတောင်နည်းနေပုံရတယ်။ သူတို့သည်တစ်ရက်လျှင် ၁၂ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင်ခြောက်ရက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကအရမ်း, အလွန်ကြိုးစားအလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ခါတလေအင်တာနက်ဟာသူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့တစ်ခုတည်းသောလွတ်မြောက်မှုပဲ” ဟုဗွန်ဒင်းနင်ကပြောကြားသည်။ အွန်လိုင်းဂိမ်းတွေမှာမင်းဟာသူရဲကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ အင်ပါယာတွေတည်ဆောက်နိုင်တယ်၊ ဒီလိုလွတ်မြောက်ခြင်းဟာလူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်ရာရောက်တယ်။ ”
မိဘများ၏မျက်မှောက်ထဲကအွန်လိုင်း ESCAP မှအချို့ကောလိပ်ကလေးတွေနောက်ထပ်ဂူသို့မဟုတ် In-ဂိမ်းအရင်းအမြစ်များကိုဆည်းပူးခြင်းနှင့်အစစ်အမှန်လောကရှိသူတို့ကိုရောင်းဖို့ဂိမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ မကြာသေးခင်ကကိစ္စတွင်တရုတ်အကျဉ်းထောင်မှူးစွပ်စွဲအအေး-ခက်ခဲငွေသားသို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိုရွှေပြောင်းအဆုံးစွန်သောအလေ့အကျင့်သို့အကျဉ်းသားရသည်။
လေ့လာမှုတော်တော်များများသည်ဆန္ဒအလျောက်နှင့်အလွန်အမင်းအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုကိုစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ကျောင်းစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခြင်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်ပိုမိုတက်ကြွစေခြင်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ စွဲစွဲသူများ၏ကြိုးပမ်းမှုများသည်အွန်လိုင်းဂိမ်းများတွင်အချိန်အလွန်အကျွံလောင်းခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအင်တာနက်စွဲလမ်းမှု၏ ဦး နှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုလေ့လာရန်သုတေသီများသည်အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအတွက်လူငယ်ရှာဖွေရေးမေးခွန်းလွှာဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
New York ပြည်နယ်စိန့် Bonaventure တက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသသူ Kimberly Young က ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်ဤကိုယ်ပိုင်အကဲဖြတ်စမ်းသပ်မှုသည်အင်တာနက်စွဲသူများ၏တရားဝင်မဟုတ်သောစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းစွဲသူများနှင့်ခွဲခြားရန်ရည်ရွယ်သည့်မေးခွန်းရှစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သူတို့ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။ (မေးခွန်းများသည်“ အင်တာနက်ကိုပြfromနာများမှလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ်စိုးရိမ်သောကရောက်စေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသလား” မှ“ အင်တာနက်ကြောင့်သိသိသာသာဆက်နွယ်မှု၊ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဆုံးရှုံးခြင်းအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရသလား” အထိရှိသည်။ "။ )
အဆိုပါတရုတ်-အခြေပြု သုတေသနအဖွဲ့သည်စှဲလမျးသူစံကျေနပ်သူကို 18 ကောလိပ်အရွယ်ကျောင်းသားများအကောက်ယူ, ဤဘာသာရပ်များသူတို့အကြောင်းကို 10 နာရီတစ်ရက်, ခြောက်ရက်ပတ်လုံးအွန်လိုင်းဂိမ်းကစားခြင်းတစ်ပါတ်ကုန်ကဆိုသည်။ အဆိုပါသုတေသီများသည်လည်းအွန်လိုင်းထက်နည်းနှစ်နာရီတစ်ရက်သုံးစွဲခဲ့သူ 18 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကိုရွေးချယ် (အနေနဲ့ထူးထူးခြားခြားအနိမ့်နံပါတ်, ဗွန် Deneen ပြောပါတယ်) ။ အဆိုပါဘာသာရပ်များအားလုံးပြီးတော့ဦးနှောက် Scan ဖတ်နှစ်မျိုးခံယူဖို့ MRI စက်သို့ plopped ခဲ့ကြသည်။
ပုံရိပ်တစ်ခုသည်စကားပြောခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်၊ မော်တာထိန်းချုပ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ အာရုံခံခြင်းနှင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ဦး နှောက်၏အရေးအကြောင်းများပေါ် မူတည်၍ မီးခိုးရောင်ကိစ္စကိုအာရုံစိုက်သည်။ အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့ voxel-based morphometry, ဒါမှမဟုတ် 3-D ကို pixels ကိုစဦးနှောက်ချိုးနဲ့လူတို့တွင်ဦးနှောက်တစ်သျှူးသိပ်သည်းဆ၏တိကျခိုင်မာစွာစာရင်းအင်းနှိုင်းယှဉ်ခွင့်ပြုထားကြောင်း VBM-တစ်ဦး technique ကိုသုံးပြီးဒီဒေတာကိုရိုးရှင်းသော။
သုတေသီများသည်အွန်လိုင်းစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ထဲရှိဒေသငယ်များကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းသွားသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသများရှိ dorsolateral prefrontal cortex, rostral anterior cingulate cortex, ဖြည့်စွက်မော်တာareaရိယာနှင့် cerebellum ၏အစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။
သို့သော် VBM နည်းပညာကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည့်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်မှအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ကားလ်ဖရစ္စတွန်ပုံရိပ်အားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မီးခိုးရောင်အစက်အပြောက်သည်မကောင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။ လေ့လာမှုတွင်မပါ ၀ င်သော Friston က“ ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုကအတော်လေးကိုပြင်းထန်ပေမယ့်သင့် ဦး နှောက်ကိုကြွက်သားအဖြစ်မှတ်ယူတဲ့အခါမအံ့သြသင့်ပါဘူး။ “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာငယ်ငယ်ကတည်းကကြီးထွားလာတယ်။ ပြီးတော့ပိုပြီးထိရောက်စွာလုပ်နိုင်ဖို့အုတ်တံတိုင်းတွေနဲ့ toning ဒေသများကိုစတင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာတွေဟာအွန်လိုင်းဂိမ်းကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ဖို့သက်သက်ပဲဖြစ်မယ်။
(Friston ကလန်ဒန်တက္ကစီယာဉ်မောင်းသည်အတွေ့အကြုံနှင့် ဦး နှောက်၏ပုံသဏ္theာန်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကိုနှိုင်းယှဉ်။ ဥပမာပေးသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်လေ့လာမှုတွင်သုတေသီများသည်တက္ကစီယာဉ်မောင်းများ၏ ဦး နှောက်ကိုဘတ်စ်ကားမောင်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ ယခင်သည်သူတို့၏နောက်ဘက်ရှိ hippocampi တွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆကိုပြသခဲ့သည်။ မြေပုံနှင့်ပတ်သက်သော Spatial Navigation and memory ချိတ်ဆက်ထားသောဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလမ်းများ ၂၅,၀၀၀ ရှိဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုအလွတ်ကျက်ထားသည့်လန်ဒန် cabbies များအတွက်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊
အင်တာနက်စွဲအပေါ်လေ့လာချက်အသစ်နောက်ထပ်အလွန်အရေးပါအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အဆိုပါသုတေသနအဖွဲ့သည်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောဒေသများအတူတကွချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဖြူရောင်ကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ဦးနှောက်အတွက်နက်ရှိုင်းသောတစ်ရှူးတွင် zeroed ။ အဆိုပါ Scan ဖတ်လက်ျာ parahippocampal gyrus အတွက်တိုးမြှင့်အဖြူကိစ္စသိပ်သည်းဆလည်းမှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်းမှချည်ထားသောတစ်ဦးပွဲချင်းပြီးပြသခဲ့သည်။ အခြားအစက်အပြောက်ခုနှစ်တွင်အဖြူကိစ္စသိပ်သည်းဆဦးနှောက်၏ကျန်မှဆွေမျိုးကျဆင်းသွား, သိမြင်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အတွင်းပိုင်းဆေးတောင့်၏လက်ဝဲ posterior ကိုယ်လက်အင်္ဂါဟုခေါ်ဝေါ်။
လတ်တလောလေ့လာမှုမှန်ကန်လျှင်လက်ျာ parahippocampal gyrus အတွက်အဖြူရောင်အမှု၌ယင်းမူမမှန်ပါကပိုခက်သည်အင်တာနက်စွဲယာယီအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရယူဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်းလက်ဝဲ posterior ခြေလက်များတွင်အဖြူကိစ္စလျှော့ချရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချစွမ်းရည်-အပါအဝင် Trump ထိုအွန်လိုင်းနေဖို့နှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကိုပြန်သွားဖို့ဆန္ဒအယှက်နိုင်ဘူး။ ထိုအရုပ်ပိုင်းဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုပင်လျော့နည်းအချို့ရှိပါသည်။ ရေဗက္ကာ Goldin တစ်ဂျော့ခ်ျ Mason ဆိုတက္ကသိုလ်မှသင်္ချာပညာရှင်နှင့် Stats များအတွက်သုတေသန၏ဒါရိုက်တာမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု 2009 ထုတ်ဝေအလားတူအလုပ်ကျော်ဟာကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုကပြောပါတယ်။ ဒီအဟောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည်အင်တာနက်စွဲ၏ဦးနှောက်ဒေသများတွင်မီးခိုးရောင်အမှု၌အပြောင်းအလဲများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Goldin အဆိုအရ, သို့သော်လေ့လာမှုယုံကြည်စိတ်ချရသောထိန်းချုပ်မှုမရှိခဲ့ပေ။
လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံး၏နမူနာအရွယ်အစားမှာသေးငယ်ပြီးစမ်းသပ်မှုဘာသာရပ် ၂၀ ကျော်သာရှိသည်။ သို့သျောလညျး Friston ကလေ့လာမှုမှာ ဦး နှောက်တစ်သျှူးသိပ်သည်းဆကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုတဲ့နည်းစနစ်တွေဟာအလွန်တင်းကြပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ “ ဒါဟာပင်ကိုယ်သိစိတ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့နမူနာအရွယ်အစားကြီးကြီးတော့မလိုဘူး။ ရလဒ်ကလုံးဝသိသာထင်ရှားသည့်အရာမှန်သမျှကိုပြသနေသည်ဆိုသည်မှာအလွန်ပြောစရာပင်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်သိပ္ပံအမေရိကန်မှတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သောသုတေသီများက IAD ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်စစ်မှန်သောရောဂါတစ်ခုအနေဖြင့်သာအရေးပါသည်ဟုအလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ “ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သမျှအချက်အလက်တွေအတွက်အချက်အလက်ရှာဖွေတာထက်ရလာဒ်တွေကိုအတည်ပြုဖို့အရေးကြီးတယ်” ဟု Goldin ကပြောကြားသည်။
Correction (06/17/11) - ဤပုံပြင်သည်ကရင်ဗွန်ဒင်နင်၏နောက်ဆုံးနာမည်၏စာလုံးပေါင်းကိုပြင်ရန်အတွက်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အသစ်ပြုပြင်ခဲ့သည်။